Igumbi lokugezela elingaphansi Loft Igumbi lokulala eliphindwe kabili - I-Airbnb
Igumbi lokugezela elingaphansi Loft Igumbi lokulala eliphindwe kabili
Cambridgeshire, England, i-United Kingdom
Ikamelo e-ikhaya ibungazwe ngu-Bellah
Mvakashi othandekayo,ngicela ukhokhele umdwebo wegumbi, linezitebhisi eziwumqansa omncane kanye nosilingi ophansi.Indlu inamasitezi amathathu(iphansi, eyokuqala neyesibili) iyonke.Igumbi lesi-6 liyindlu yokulala eyi-double bedroom nethoyilethi langasese. Isitezi sesibili esiyindawo ephezulu, sicela uhlole ngokucophelela ngaphambi kokubhuka.Asiphakamisi abantu abadala ukuthi babhukhe leli gumbi.Kunokugeza okuhlanganyelwayo esitezi sokuqala futhi sihlinzeka ngakho konke okudingayo nsuku zonke okuhlanganisa i-shampoo, isomisi sezinwele, ukugeza umzimba kanye nempushana yokuwasha
Ikhishi, igumbi lokuhlala nelondolo kuphansi phansi. Izivakashi zizobe zabelana ngekhishi elihle nelikhulu elinokuhlobisa kwesimanjemanje; kukhona amakhabethe egumbini lokuphumula ekamelo ngalinye ukuze izihambeli zikwazi ukugcina izinto zazo endaweni yazo. Ikhofi kanye netiye kukhona amafriji amabili ahlukaniswa ngokwenombolo yekamelo (kunamalebula emakhabetheni naseziqandisini) kukhona amapani, amabhodwe kanye ne-oven, kukhona umshini wokuwasha izitsha ekhishini kanye nomshini wokuwasha phakathi. Igumbi lokuwashela izingubo, izivakashi zingalenga izingubo zazo egunjini lokuwasha noma egumbini lokuphumula, Amasudikesi kufanele abekwe eduze kwezitebhisi ngoba kungaba nzima ukuwayisa esitezi sesibili.
4.44 · 25 okushiwo abanye
Indlu ikuMill road ibhekene neMuslim Activity Centre.Kunesitolo kanye nomgwaqo ongaphansi komhlaba eduze kwendlu.
Kungaba ngcono uma izivakashi zingangithumelela imiyalezo ngo-WhatsApp noma ngomlayezo njengoba ngingumfundi wase-Uni futhi kwesinye isikhathi angitholakali lapho ngicosha khona, ngiyaxolisa nganoma yikuphi ukuphazamiseka. Ngikhululekile ukuphendula imilayezo noma ukuza endlini ngezikhathi eziningi. isikhathi ukuze izivakashi zingithinte uma kunezinkinga noma izidingo.
Kungaba ngcono uma izivakashi zingangithumelela imiyalezo ngo-WhatsApp noma ngomlayezo njengoba ngingumfundi wase-Uni futhi kwesinye isikhathi angitholakali lapho ngicosha khona, n…
Hlola ezinye izinketho ezise- Cambridgeshire namaphethelo